Soo ogow qaybta xirfadda ee ay tahay inaad u hagto naftaada adoo raacaya astaantaada astrological. - KU SAMEEYAAN NABADA
Daabacaha - IYO MACLUUMAADKA WAA KU SAABSAN
Ivory Coast - Job ayaa bixiya
Soo ogow qaybta ganacsiga ee aad u baahan tahay inaad naftaada u jiheeysid adigoo raacaya calaamadaada astrological.
By bryanekobe On Juun 25, 2020
Marka laga hadlayo cilmiga xiddigiska waxa jira laba iskuul: kuwa aan rumeysnayn haba yaraatee ee u malaynaya inay ka sarreeyaan aayaha iyo shakhsiyadda iyo, kuwa rumeeysan taas! Xitaa haddii aadan aad u qanacsanayn oo aadan ahayn nooca lagu hubiyo qalabka wax lagu qoro ee loo yaqaan 'horoscope' si aad u aragto haddii burburkaagu uu ugu dambeyntii ku arki doono toddobaadkan, ogow in astrology ay intaas ka badan tahay annaguna waan arki doonnaa kuu caddee. Baadhitaan badan kadib, waxaan go aansanay waaxyada xirfadda taas oo ay tahay inaad naftaada u hanuuniso sida ku xusan astaamahaaga zodiac. Hoos ugu dhaadhac si aad u ogaato sanduuqa lagu shaqaaleysiin karo iyadoo loo eegayo calaamadaada astrological!
Aries waa calaamad dabeed xukuma meeraha Mars oo ah meeraha ficil iyo geesinimo! Sidaa darteed Aries waa qof firfircoon, madax-bannaan oo hal-abuur leh. Tani waa sababta haddii aad Aries tahay waxaan ku arki lahayn adigoo si fiican ugu shaqeynaya muusikada ama munaasabadaha.
Taurus waa xoogaa xoogaa xasilloon oo ka mid ah calaamadaha zodiac-ka. Isagu waa naxariis badan yahay, diirran yahay, dad badan buu jecel yahay. Tani waa sababta haddii aad Taurus u tahay inaad naftaada ugu jiheysato dhinaca moodada, quruxda ama xitaa ganacsiga adduunka… Waxaad tahay qof dadaala oo aad jeceshahay xirfadaha ay ku dadaalayaan in lagu abaalmariyo oo aad saxantahay!
Gemini waa bulsho aad u wanaagsan isla markaana leh dabeecad furan. Waa nin maskax badan oo caqli badan oo jecel inuu barto waxyaabo cusub. Tani waa sababta haddii aad tahay Gemini waxaan kugula talineynaa inaad naftaada u hanuuniso xirfadaha isgaarsiinta iyo saxaafadda. Wax kasta oo u baahan gudbinta macluumaadka iyo ahaanshaha dabeecad firfircoon, maaraynta maaddooyin dhowr ah isla waqti isku mid ah kuma niyad jabi doontid, liddi ku ah!
Maadaama aad tahay Kansar, waxaad tahay qof dareen badan oo shucuur ah isla markaana wax walba ka sareeya oo aad u daacad badan oo dhiirigelin leh. Taasi waa sababta aan u maleynayno inaad noqotid qareen, macalin ama la shaqeeya caruurta maxaa yeelay waxaad matalaysaa taageerada shucuurta dhabta ah ee dadka kugu xeeran.
Libaaxa waxaa xukuma qoraxda! Waa calaamad gubanaysa iyo calaamad xukumaysa. Markaa hadaad Libaax tahay, waxaan ku aragnaa inaad ka shaqeyso cilmiga caafimaadka, siyaasada ama qaab dhismeedka. Laakiin sidoo kale madadaalada, sameynta filimka ... Marka la soo koobo, wax kasta oo sixi kara waxa aad jeceshahay.
8 waxyaabood oo ay tahay inaad dhaho si aad naftaada u dhiirrigeliso sannadka oo dhan
3 astaamo oo aadan dooran jihada saxda ah
Halkan waxaa ah 10 qalab oo had iyo jeer ah kan ugu fiican
Dadka reer guuraaga ah ee bikrada waa dad caqli badan oo xasaasi ah. Waa calaamad Earth oo sharraxaysa sababta Virgos ay ugu baahan yihiin deggenaasho noloshooda. Tani waa sababta aan u maleyneyno iyaga inay ka shaqeynayaan xirfadaha nootaayada iyo maamulka ama qeybta suugaanta. Haddii aad Virgo tahay waxaad tahay qof aad u abaabulan oo aad leedahay dareen shaqo oo weyn. Sifooyinka aasaasiga u ah xirfad noocan ah!
Deynta: tumblr, fadlanjulia.tumblr
Libra waxay hoos tagtaa calaamadda quruxda iyo wada noolaanshaha. Kuwa ka hooseeya calaamaddan waa dad naxariis badan taasina waa tan u oggolaanaysa iyaga inay xidhiidh wanaagsan la yeeshaan dadka kale sababta oo ah waxay inta badan ciyaaraan doorka dhexdhexaadiyaha. Isu dheellitirku ma jecla khilaafaadka waana sababtaas waxaan u aragnaa iyaga oo ka shaqeeya cadaaladda, dhexdhexaadinta, xitaa wakiilada safarka. Marka la soo koobo, Xirfadaha halka ay u tagayaan “caawinaan” kuwa kale!
Scorpion waa calaamad ka buuxsamaysa kalgacal iyo dareen. Si kastaba ha noqotee, taasi kama hortagayso inuu ogaado sida loo xakameeyo shucuurtiisa. Isaguna waa shaqsi aad u daacad ah, iskaa ah oo deeqsi ah. Thanks to dhan tayadiisa, wuxuu ka shaqeyn karaa qeybta caafimaadka laakiin sidoo kale xirfadaha halkaas oo ay tahay inuu ku maareeyo macluumaadka qarsoodiga ah sida gorgortanka ama wakiilka qarsoodiga ah! Waa maxay, kuma jiraan filimada kaliya.
Dadka asalka u ah Sagittarius waa dad dabacsan, dad faraxsan laakiin waxay si fiican u yaqaanaan sida loo xakameeyo shucuurtooda ka soo horjeedda baahiyahooda muhiimka ah ee ay tahay in ay is muujiyaan! Taasina waa sababta ay ugu fiicnaan lahaayeen inay noqdaan cilmi-baarayaal cilmu-nafsiga ah ama, xiriiriyaasha xiriirka saxaafadda tusaale ahaan.
Sida Capricorn ahaan waxaad tahay qof himilo badan oo dadka hanuunsan! Waxaad naftaada siisaa habka aad ku gaarto yoolkaaga oo leh halis weyn iyo qalafsanaan. Iyo sida saxda ah, jacaylkaaga edbinta wuxuu kaa dhigayaa maamule aad u wanaagsan! Laakiin sidoo kale waxaad noqon kartaa siyaasi ama injineer tusaale ahaan.
Aquarius waxaa xukuma meeraha Uranus waana taas waxa isaga ku kalifaysa inuu doonayo inuu beddelo! Haddii aad tahay Aquarius, waxaad shaki la'aan u baahan tahay saaxiibbadaa, si aad u samayso qorshayaal, wax la yaab leh oo qalloociso noloshaada, haddii kale waxaad caajisaysaa geeri… Tani waa sababta shaqadaada ugu fiican ay u noqon laheyd sawir qaade ama maamule, wax muuqaal ah!
In kasta oo Pisces ay tahay calaamadaha ugu nugul calaamadaha zodiac-ka, hadana uma eka sida ugu jilicsan ee ay u egtahay. Awood weyn oo dabeecad leh, wuxuu difaaci doonaa iligga iyo cidiyaha waxa uu rumeysan yahay. Tani waa sababta, haddii aad tahay Pisces, waxaad u jeesan kartaa xirfadaha caafimaadka si aad u caawiso dadka kale maxaa yeelay waxaad tahay qof aad u dhiirran. Laakiin sidoo kale xagga xirfadaha farshaxanka, sida qoob ka ciyaarka iyo miyuusigga meesha aad u oggolaan lahayd in fikradahaagu ka hadlaan!
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u soo muuqday: https://trendy.letudiant.fr/le-job-etudiant-auquel-postuler-en-fonction-de-ton-signe-astro-a4800.html
Soo ogow qaybta xirfadda ee ay tahay inaad u hagto naftaada adoo raacaya astaantaada astrological.
bryanekobe 704 posts 0 comments
BVB waxay dooneysaa inay xiddigga Mareykanka Reyna heshiis waqti dheer ah la gasho
miisaaniyaddu way xadidan tahay? Halkan waxaa ah 3 talo-bixin oo sida ugu wanaagsan loogu maareeyo miisaaniyaddaada
Waa kuwan tabaha qaar si aad dhakhso ugu dhigto casharradaada
Cinwaanka emailkaaga lama daabici doono.
Ku keydi magacayga, emaylkayga iyo degelkayga barta biraawsarka si aan ra'yigayga xiga u bixiyo.
Waa tan sida uu Bruno Fernandes qadka dhexe ee reer Portugal…
Qaboojinta xiriirka ka dhexeeya Manchester City iyo Leroy Sane
Cameroon: Brenda Biya waxay qirtay inay leedahay meel jilicsan oo loogu talagalay Locko waxayna qorsheyneysaa inay…
Weeraryahanka Real Madrid Karim oo maxkamad la soo taagayo
Lionel Messi aad iyo aad buu u quutaa, ayuu ku hadlayaa
5 talooyin oo si habboon loo diyaariyo maqaarkaaga ka hor intaadan u bandhigin…
Marwada Gaga: Genius mise charlatan?
Horyaalka kooxda Liverpool ayaa waxaa saxayay kooxda dolphin City
Ugu yaraan 50 qof ayaa la dilay intii ay socdeen mudaaharaadyada ...
Raiisel wasaarihii hore ee Faransiiska François Fillon wuxuu xukumay…
NUM 2020 - SAAXIISTA RAADIIDKA. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.